Dooni sida badeeco oo ay suurtagal tahay in ay ku degto xeebta Boosaaso - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandDooni sida badeeco oo ay suurtagal tahay in ay ku degto xeebta Boosaaso
Dooni sida badeeco oo ay suurtagal tahay in ay ku degto xeebta Boosaaso
February 5, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Doonida oo ku caariday xeebta magaalada Boosaaso. [Sawirka: Facebook]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Dooni ganacsi oo sida badeeco gaareysa 1500 tan ayaa macquul ay tahay in ku degto Badda Cas ee Boosaaso kadib markii masuuliyiinta dekada Boosaaso ay diideen in ay ku soo xirato dekada, sida ay sheegayaan ilo-wareedyadu.
Sawiro lasoo dhiggay baraha bulshada ayaa muujinaya doonida oo ku caariday xeebta magaalada Boosaaso.
Ma jirto wax hadal ah oo kasoo baxay masuuliyiinta Puntland oo ku saabsan doonida.
Puntland ayaa dekada Boosaaso ayaa si rasmi ah ugu wareejisay shirkada DP World bishiii Oktoobar ee sanadkii 2017-kii.
February 14, 2018 Xagee maraysaa badbaadinta doonida ganacsi ee ku caariday xeebta Boosaaso?
Shir u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo ka furmi doona Muqdisho
Merchant vessel carrying shipment likely to sink off Bosaso
Puntland oo beenisay warbixin sheegaysa in diyaarada Daalo Airline ay ka mamnuucday garoomadeeda
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa beenisay warbixin sheegaysa in diyaarada Daalo Airline laga mamnuucay garoomada Puntland. “Wasaarada Duulista Hawadda iyo Garoomadda ee Dowladda Puntland, waxa ay cadaynaysaa in aan waxba ka jirin warbixinta lagu sheegay in [...]